Umrepha ujabulele ukusebenza no-Emtee
UMREPHA wakuleli uMtee ocula noTkinzy abajabule ngokusebenza bobabili njengoba kukhona ingoma abayikhiphile abathi bazojabulisa ngayo abalandeli baboIsithombe: SITHUNYELWE
NOKUBONGWA PHENYANE | March 18, 2020
UTHEMBISA lukhulu umculi we-hip hop u-Anthony Felix odume ngelikaTkinzy njengoba esanda kukhipha ingoma ethi Natural apike kuyo u-Emtee.
UTkinzy ukhipha le ngoma nje bese kuyiminyaka emibili engazwakali endimeni yomculo.
Njengoba ebehlabe ikhefu nje uveze ukuthi ubematasa elungiselela inkampani yakhe yokuqopha iKinging Music Records, akhiphe kuyo le ngoma.
“Ngijabule kakhulu ukusebenza no-Emtee. Bese kuyisikhathi ngilinde ukusebenza naye njengoba sangena kanye kanye endimeni yomculo, bese sazane isikhathi eside njengoba yena agcina esayine ngaphansi kwenkampani i-Ambitious mina ngasayina ngaphansi kwenkampani iGallo Records okwenza sangakwazi ukuthola ithuba lokuthi sisebenze sonke,” kuchaza uTkinzy.
Uthe impumelelo yabo uyijabulele njengoba ngesikhathi bekulezi zinkampani bajabulisa abalandeli babo ngezingoma ezihlukene ezabakhela igama kuleli futhi zabahlomulisa emikhakheni yezindondo eyahlukene.
U-Emtee uveze ukuthi uTkinzy ungomunye wabaculi ake ahlangana nabo besakhula kule ndima wambona ukuthi unethalente elimangalisayo.
“Mina naye bekufanele sikhombise abalandeli bethu ithalente esinalo emculweni uma sihlangene. Ngijabule kakhulu ukusebenza naye futhi ngiyathemba nabalandeli bethu bazowujabulela umsebenzi wethu,” kuchaza * -Emtee.